Shona to English Meaning of correct - shona.english-dictionary.help
English to Shona Meaning :: correct
Correct - zvechokwadi Correct :: zvechokwadi Correctable :: correctable Corrected :: kugadziriswa Correcter :: correcter Correctest :: correctest Correcting :: pakururamisa Correctly :: nemazvo Correctness :: yakarurama Corrector :: corrector Corrects :: Rinoruramisa
zvematongerwo enyika zvechokwadi
if you didn't CORRECT me all the time.
English to Shona Dictionary: correct
Meaning and definitions of correct, translation in Shona language for correct with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of correct in Shona and in English language.
What correct means in Shona, correct meaning in Shona, correct definition, examples and pronunciation of correct in Shona language.
Malign (Unotuka) :: The American Empire emerges then not as a complex phenomenon with some good effects and some malign ones Malleable (nyore kufurirwa) :: But the rather malleable populace here seems to be quite pleased at this governmental largesse